Sunday May 03, 2020 - 11:04:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fagaare kuyaal magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Sh/dhexe waxaa ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyay nin basaas u ahaa dowladda Mareykanka.
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada islaamka ee wilaayada Sh/dhexe ayaa xukun ku ridday nin lagu magacaabo Yaasiin Maxamuud Cumar oo lagu eedeeyay in uu ubasaasayay sirdoonka dowladda Mareykanka.
Yaasiin ayaa maxkamadda ka hor qirtay in sarkaal Maraykan ah oo jooga Xalane uu usoo diray xogta iyo Lambarada xubno katirsan dhaq dhaqaaqa Jihaadiga ah ee Al-Shabaab, Jaajuusta ladilay ayaa sheegay in sarkaal katirsan sirdoonka dowlada Federaalka uu ku xiray sarkaal katirsan CIA-da oo ku sugan Xerada Xalane.
Ninkan basaaska ah ayaa soo qaatay qandaraas ah in uu keeno macluumo dhammeystiran oo lagu dili karo xubno katirsan Al Shabaabka ku sugan gobolka Sh/dhexe waxaana loo ballan qaaday in haddii uu howshaas ku guuleysto lasiin doono lacago kumanaan kun oo dollar ah balse isagoo howshaas ku howllan ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka wilaayada Islaamiga Sh/dhexe.
Waa markii ugu horraysay oo nin jaajuusnimo ku eedaysan lagu dilo deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe, dhowr jeer ayay diyaaradaha Mareykanka duqeymo ka fuliyeen duleedyada degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee Sh/dhexe.